Muxuu qabanayaa Premier Bank oo dhawaan laga furay Muqdisho? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigayay adeegyada Bangiga Premier ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay hoteelka City Palace ee magaalada Muqdisho, iyadoo lagu soo bandhigay adeegyo cusub oo uu bangigu soo kordhiyay. Wakiilo ka socday shirkadaha xawaaladaha, bankiyada, ganacsato, danjireyaal, bahda waxbarashada, ururada haweenka, dhalinyarada, qurbo-joogta, bahda isboortiga iyo marti sharaf kale ayaa ka qeyb galay munaasabaddan.
Adeegyada Premier Bank soo banadhigay ayaa waxaa ka mid ah maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka, xisaabaad (Akoonno) u gaar ah haweenka (maandeeq account), Internet banking qofka akoonkiisa ku maamulan karo isaga oo meel kasta adduunka ka jooga iyo sidoo kale akoonno loogu talo galay qurbo-joogta oo iyada dhawaan bankigu daah-furi doono.
Sheekh Badruddiin Sheekh Rashiid Ibraahim oo ka tirsan golaha shareecada ee bankiga ayaa faahfaahin ka bixiyay hababka maalgelineed ee bankigu isticmaalo (Siyaq-attamwiil al-islaamii) isaga oo ka xusay habka muraabaxada, Ijaarada iyo bayc-asalam. Sheekha ayaa xusay in qaacidada baananka islaamku ku dhisan tahay in bankigu khatar (risk) qaato si uu faa’iido xalaal ah u helo.
Bankiga Premier ayaa sidoo soo bandhigay adeegyo aan dalka horay loo keenin sida MasterCard iyo SWIFT oo suurta galinaya in lacagaha loo diro isla markaana lagaaga soo diro caalamka.
“MasterCard oo isugu jira Debit iyo Prepaid ayaa Soomaalida gudaha u suurogelinaya in ay kaararka Premier ku isticmaali karaan daafaha adduunka iyaga oo ATM lacag kala bixi kara, badeeco kaga iibsan kara Point of sale ama Internet-ka wax kaga iibsan kara, halka Soomaalida qurbaha adeegani u suurogelinayo in ay kaararkooda MasterCard ee dibedda ay ku adeegsan karaan gudaha Soomaaliya” Ayuu yiri Cabdirisaaq Maxamed Axmed oo ah madaxa Operations-ka bankiga.
Cabdiweli Musse oo ah madaxa shirkadaha xawaaladaha ee Muqdisho ayaa soo dhaweeyay adeegyada uu soo kordhiyay Premier Bank isaga oo ku tilmaamay kaalinta xawaaladaha iyo bankiyadu ugu jiraan Soomalaiya ay la mid tahay kaalinta shidaalku ugu jiro dawladaha Khaliijka. Cabdiweli ayaa sidoo kale ugu baaqay cid kasta oo awoodda in la caawiyo lana ilaaliyo hay’adaha maaliyadeed ee dalka.
Guddoomiyaha guddiga sare ee bangiga Premier Jibriil Hassan Maxamed ayaa sheegay in ganacsatada bangigaan furtay ay ka jawaabayaan baahida ay bulshada Soomaaliyeed u qabto adeegyada banki ee ay u baahanyihiin isaga oo sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in dadaal iyo waqti fara badan ka galay milkiilayaasha iyo maamulka bankiga sidii uu dalka u keeni lahaa adeegyo casri ah dalka ku xiraya caalamka.
“SWIFT waa adeeg sahlaya in Soomaaliya lacag laga diro isla markaana loo soo diro”. ayuu yiri Jibriil oo intaas ku daray in adeegyadan casriga ah ee Premier soo kordhiyay ay sawir wanaagsan ka bixinayaan dalka.
Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo hadal ka jeediyay xafladda ayaa sheegay in loo baahan yahay in bangiyo Islaami oo bixinaya adeegyadan oo kale ay dalka ku bataan taas oo qeyb ka qaadan doonta horumarka iyo maalgashiga waddanka.
Adeegyadan uu soo bandhigay Bangiga Caalamiga Primeir ayaa la sheegay iney noqon doona mid haqab tiri doono baahida bulshada Soomaaliyeed u qabto adeegyada Banki ee casriga ah.
Balse Alshabaab oo la dagaallama Soomaaliya ayaa baraha ay Internet-ka ku leeyihiin ku qoray iney aaminsan yihiin in shaqada bankigaani tahay mid ku saleysan ribo, inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyn ah.